Golem Network Token စျေး - အွန်လိုင်း GNT ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Golem Network Token (GNT)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Golem Network Token (GNT) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Golem Network Token ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $54 499 821.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Golem Network Token တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Golem Network Token များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Golem Network TokenGNT သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0735Golem Network TokenGNT သို့ ယူရိုEUR€0.0622Golem Network TokenGNT သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0563Golem Network TokenGNT သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0669Golem Network TokenGNT သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.653Golem Network TokenGNT သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.463Golem Network TokenGNT သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč1.63Golem Network TokenGNT သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.273Golem Network TokenGNT သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0972Golem Network TokenGNT သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.103Golem Network TokenGNT သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$1.63Golem Network TokenGNT သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.569Golem Network TokenGNT သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.394Golem Network TokenGNT သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹5.49Golem Network TokenGNT သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.12.41Golem Network TokenGNT သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.101Golem Network TokenGNT သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.112Golem Network TokenGNT သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿2.28Golem Network TokenGNT သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.51Golem Network TokenGNT သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥7.85Golem Network TokenGNT သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩87.05Golem Network TokenGNT သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦28.47Golem Network TokenGNT သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽5.36Golem Network TokenGNT သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴2.02
Golem Network TokenGNT သို့ BitcoinBTC0.000006 Golem Network TokenGNT သို့ EthereumETH0.000191 Golem Network TokenGNT သို့ LitecoinLTC0.00135 Golem Network TokenGNT သို့ DigitalCashDASH0.00081 Golem Network TokenGNT သို့ MoneroXMR0.000825 Golem Network TokenGNT သို့ NxtNXT5.73 Golem Network TokenGNT သို့ Ethereum ClassicETC0.0108 Golem Network TokenGNT သို့ DogecoinDOGE21.21 Golem Network TokenGNT သို့ ZCashZEC0.000892 Golem Network TokenGNT သို့ BitsharesBTS2.26 Golem Network TokenGNT သို့ DigiByteDGB2.35 Golem Network TokenGNT သို့ RippleXRP0.261 Golem Network TokenGNT သို့ BitcoinDarkBTCD0.00253 Golem Network TokenGNT သို့ PeerCoinPPC0.244 Golem Network TokenGNT သို့ CraigsCoinCRAIG33.48 Golem Network TokenGNT သို့ BitstakeXBS3.13 Golem Network TokenGNT သို့ PayCoinXPY1.28 Golem Network TokenGNT သို့ ProsperCoinPRC9.22 Golem Network TokenGNT သို့ YbCoinYBC0.00004 Golem Network TokenGNT သို့ DarkKushDANK23.58 Golem Network TokenGNT သို့ GiveCoinGIVE159.17 Golem Network TokenGNT သို့ KoboCoinKOBO16.74 Golem Network TokenGNT သို့ DarkTokenDT0.0677 Golem Network TokenGNT သို့ CETUS CoinCETI212.25
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 14 Aug 2020 07:05:03 +0000.